January | 2018 | HimiloNetwork
Sheikh Khalid Yasin – Daaciga Waqtigiisa Dacwada Islaamka u hibeeyey!
Zakariya January 29, 2018	Leave a comment 591 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Mr. Khalid Yasin waa daaci Muslim American ah kaas oo diinta Islaamka qaatay sannadkii 1965-kii. Wuxuu ku dhashay Brooklyn, New York, dalka Maraykanka. Hadda wuxuu ku nool yahay Sheffield ee carriga UK. Waa helaha Ururka Islamic Broadcasting Corporation iyo Xarunta Hadafka Nolosha ee ku taalla isla Sheffield. Wuxuu kamid yahay daaciyada Islaamka ee qarnigii ina dhaafay dunida Galbeedka kasoo if ...
Zakariya January 29, 2018	Leave a comment 268 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Caruusad iyo caruuskeeda ayaa lagu qasbay inay laba qol oo xabsiga dhexdiisa ah ku kala hoydaan habeenkii koobaad ee aqalkooda. Halkii ay habeen farxadeed ku qaadan lahaayeen arooskooda, lamaanaha oo ku nool England waxaa lagu xiray xasbiga, marka loo eego xeer ilaaliyaha. Booliska ayaa loogu yeeray goobta ay xafladda arooskooda ay ka jirtay si ay u ugu ...
Zakariya January 29, 2018	Leave a comment 200 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Siyaasiga Xisbiga Midigta Fog ee Jarmalka ayaa wacad ku maray inuu Islaamka ka mamnuuci doono gudaha dalkiisa iyo kuwa Galbeedka yurub marka ay xilka qabtaan. “Markii aan talada gacanta ku dhigno waxaan bilaabi doonaa tallaabada aan uga hortagi doono Islaamku inuu ku xididaysto dalkeenna: saddexda magac ee Maxamed, Aadaan iyo Minaret in badan lagama maqli doono halkan, ...
Zakariya January 28, 2018	Leave a comment 215 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Maktabad nuuceeda tii ugu horreysay ayaa laga furay degmada Çankaya ee magaalada Ankara halkaas oo awal ahayd kob lagu qubo qashinka. Shaqaalaha nadaafadda dowladda hoose oo muddo bil ah ku bixiyay ururinta buugaagta lagu tuuro goobaha qashinka iyo jidadka ayaa naftiisa iyo tan reeraha shaqaalaha nadaafadda u dhisay si ay aqoon uga kororsadaan aqriskooda. Sidii warka sheekadiisu ay ...
Sheikh Yusuf Estes – Daaciga Bulshaawiga ah.
Zakariya January 28, 2018	Leave a comment 500 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Sheikh Yusuf Estate wuxuu kusoo koray diinta Masiixiga. Wuxuu wax ku bartay gobalka Texas ee dalka Maraykanka. Wuxuuna ahaa daaci faafiya diinta Masiixiyadda kaas oo sidoo kale ahaa hodan maal-qabeen ah. Wuxuu sanadkii 1944 ku dhashay Ohio dalka Maraykanka. Sanadkii 1991 wuxuu isku dayay inuu dalka Masar kusoo gaaleysiiyo nin Muslim ah. Wuxuuse la kulmay aragti kale ...
Zakariya January 28, 2018	Leave a comment 189 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Dibadbax taageero muujin ah oo ay iskugu soo baxeen ururrada diimaha kala duwan ee Maraykanka oo lagu asteynayay sanad kadib baaqii Madaxweyne Trump uu Muslimiinta kaga mamnuucay inay soo galaan Maraykanka ayaa ka dhacay magaalada New York. “Waa farriin xoogan iyo tallaab muhiim ah,” ayay tiri Rev Dr Chloe Breyer, oo hoggaan u ah Naadiga Interfaith. “Waana mid muujinaysa ...
Siyaasiga Xisbiga Midigta Fog ee Jarmalka oo diinta Islaamka qaatay.
Zakariya January 24, 2018	Leave a comment 231 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Xubin kamid ah Xisbiga Bidixda Fog ee Jarmalka ayaa diiinta Islaamka qaatay – isaga oo shaqadii uu ka hayay Xisbigiisana isaga tagay, sida ay soo xigatay Deutsche Welle. “Waa wax aniga ii gaar ah,” ayuu yiri Arthur Wagner markii la weydiiyay sababta uu ku islaamay. Warar ayaa isasoo tarayay taniyo markii uu Xisbiga shaqadii uu ka hayay iska casilay ...
Dowlad ku sifowday Islaam naceyb oo burburisay Masaajid dhisnaa Boqol sano ka badan
Zakariya January 23, 2018	Leave a comment 176 Views
Muqdisho – Dowlada Myanmar ayaa burburisay Masjid weyn oo Taariikhi ah oo ku yiilay magaalada lagu magacaabo Mango. Talaabadan oo la sheegay iny salka ku hayso ololaha baabi’nta meelaha Taariikhiga ah ee Islaamka oo ku yaalla dalkaasi. Ciidamada dowlada Myanmar ayaa la sheegay iney galeen masjidkan ka dibna dumiyeen, waxaana la sheegay inuu dhisnaa in ka badan 100 sano. Waxaa ...
Dhulkeenna Maanta iyo Dhir-beerista.
Zakariya January 23, 2018	Leave a comment 938 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Dhulku waa saxan laga cuno wixii lagu beerto oogadiisa. Marka aysan wax cunno ah kuugu jirin saxanka, muhiim kuuma ahan inuu ku agyaalo. Hayeeshe marka raashiin aad ka cuneyso waad dhadhansaneysaa: jeclaaneysaa inuu hadiyo jeer kuugu jiro. Noolaha guudka arlada saaran oo dhan waxaa saxan u ah dhulka oo ay ku nool yihiin kheyraadkiisa. Waana wareegtada hadiyo ...
Haddii uu jiri lahaa Matxaf keydiya Dhaqankeenna.
Zakariya January 23, 2018	Leave a comment 334 Views
Muqdisho – Dhismihii weynaa oo loogu tala-galay in la dhigo: laguna keydin jiray wixii alaabo ah oo leh qiimo taariikheed, cilmiyeed, dhaqan iyo falsamida si loogu soo daawasho tago ee Matxafka Qaranka Soomaaliyeed, lumintiisu waxay urugo ku tahay hidde-raaca sooyaalka umadda maadaama uu billadaye u ahaa waxa aan nahay. Marka umadi si xeel-dheer u leedahay meel ay jiilalkeeda is-bedelaya ka ...
Bulshada iyo Hab-fahmeedka Deegaan
Sidee Muslimiintu kaga qeyb-qaateen Samata-bixinta Xasuuqii ka dhacay Rwanda?!